“Oromummaa cabsuun akka hindanda’amne abbootiisaaniirraa barachuu qabu” -Abbootii Gadaa Oromoo - ETHIOPIANS TODAY
“Oromummaa cabsuun akka hindanda’amne abbootiisaaniirraa barachuu qabu” -Abbootii Gadaa Oromoo
Tibbana ajjeechaafi buqqaatii eenyummaarratti hundaa’ee iddoo garaa garaatti raawwatamaa jiru balaaleeffachuudhaaf magaalota naannoo Amaaraa keessatti hiriirri nagaa gaggeeffamaa tureera.
Hiriirichaanis du’aafi buqqaatiin lammiilee nagaa akka dhaabbatuufi dhaadannoolee kanneen biroo kan dhaggeessisan yemmuu ta’u, darbee darbee immoo yaadootni waliin jireenya sabootaa irratti rakkoo uumuu danda’an tokko tokko calaqqisaniiru.
Keessattuu ‘Oromomummaan haa cabu!’ dhaadannoon jedhu Oromoo hedduu biratti komii kaasaa kan jiru yemmuu ta’u, gochi akkanaa kun immoo waliin jireenya sabootaa irratti rakkoo kan uumu waan ta’eef tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamuu akka qabu Abbootiin Gadaa Oromoo ni gaafatu.
“Qaamoleen jibbiinsa saboota giddutti facaasan kunniin saba Amaaraa bal’aa bakka bu’uu hindanda’an” kan jedhan immoo Abbaa Gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa, ilaalchi akkasii tokkummaa biyyattiifi waliin jireenya sabootaa kallattii hintaanetti kan geessu waan ta’eef tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamuu akka qabu gaafatu.
Hanga Oromoon lafarra jirutti Oromummaa cabsuun waan yaadamuu miti. Kun immoo Oromoo caalaatti tokkummaadhaaf kan kakaasu akka ta’es ni dubbatu.
Naannoo Amaaraatti hiriira tibbana ba’ame irratti dhaadannoowan dhaga’aman tokko tokko aad-malee dha: Abboot ii Gadaa Oromiyaa